Ihe nkpuchi ihe eji emeputa ihe eji eme ihe - China mkpuchi ihe eji emeputa ihe na ndi na enye ya
OK-100 Type nkpuchi Automatic Cartoning Machine
Main Performance Ma Structure Atụmatụ 1.This igwe a na-akpan mere maka Nkpuchi akpaka ikpe mbukota; 2.Carton ndokwa nwere ike ahaziri, ngwaahịa stacking na-akpụ na-akpaghị aka. 3.It adopts kwụ ikpe mbukota usoro, na-akpaghị aka na-emeghe na n'ọnọdu katọn n'akụkụ flaapu, ma hụ were were mbukota, enweghị katọn ngọngọ. 4.Wide nso nke ngwa; nwere ike izute iche iche nke mbukota ngwaahịa. 5.Four-onu teepu akara ngwaọrụ 、 na-ekpo ọkụ gbazee mama igwe nwere ike ịgbakwunye ma mee ya. ...
OK-208 Type nkpuchi mbukota Machine
Arụ Ọrụ Nhazi Na Nhazi Atụmatụ A na-achịkwa igwe site na ntụgharị ntụgharị ugboro abụọ, a na-edozi ogologo akpa ma belata ozugbo, otu nzọụkwụ na ebe, chekwaa oge na ihe nkiri. Mperi onwe-nchoputa ọrụ, kpatara ngosipụta doro anya. Nnukwu uche fotoelectric sensor track agba akara, ntinye ntinye ntanetị akara akara, mee ka ọnọdụ ịkpụ akara mara nke ọma. Okpomọkụ nọọrọ onwe ya PID akara ka mma imeghari ka a ...
OK-902 Maskdị Nkpuchi Bundling Machine
Main Performance Ma Structure Atụmatụ Site akpaka nri, akpa Ndinam na nkwakọ nke ngwaahịa na-niile dechara na-akpaghị aka. Ihe mbụ e kere eke akpa oghere na bagging usoro na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịgbanwe nha. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka nkwakọ ngwaahịa akpaka nke otu ma ọ bụ ọtụtụ nkpuchi. Ihe Nlereanya & Ihe Nlekọta Nka na ụzụ Ihe Nlereanya OK-902 Speed ​​(akpa / min) 30-50 akpa / min Nha igwe (mm) 5650mm (L) X16500mm (W) x2350mm (H) Ibu Igwe nke Igwe (kg) 4000kg Power sup ...